Dagaal Soomaali iyo Oromo u dhaxeeya oo agagaarka Tulli Guuleed ka socda | Baydhabo Online
Dagaal Soomaali iyo Oromo u dhaxeeya oo agagaarka Tulli Guuleed ka socda
Wararka ka imaanaya Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay sheegayaan in dagaal uu mar kale maanta ka qarxay agagaarka Deegaanka Tulli Guuleed.
Wali ma cadda khasaaraha nafeed iyo midka maal ee ka dhashay.
Dadka deegaanka ee labada dhinac oo ay BBC-du la xiriirtay ayaa isku raacay dagaalkani uu yahay mid siyaasadaysan.
Dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba jifo oo ka soo kala jeeda Soomaalida iyo Orommada, kuwaasoo uu iska hor imaad ku dhex marayay dhawaanahan meel aan ka fogeyn Tulli Guuleed oo qiyaastii 50 – 60 KM waqooyiga kaga beegan magaalada jigjiga.
Deegaankaas ayaa xad la leh dhulka buuraleyda ah ee Harar, gaar ahaan degmada Jinacsani ee ay Orommadu degto.
Wararku waxay sheegayaan in soddomeeyo ruux oo labada dhinac ka kala tirsan ay ku dhinteen saddexdii asbuuc ee u dambaysay oo dagaalladu ay dib u soo cusboonaadeen.